Nidaamka Kukiyada - My Mili
1. Bakhaarku si otomaatig ah uma ururiyaan macluumaad kasta, marka laga reebo macluumaadka ku dhex jira kukiyada.
2. Kukiyada (waxa loogu yeero "cookies") waa macluumaadka IT, gaar ahaan feylasha qoraalka, kuwaas oo lagu keydiyo aaladda dhamaadka isticmaaleha Bakhaarka oo loogu talagalay in lagu isticmaalo websaydhyada Bakhaarka. Kukiyada ayaa had iyo jeer leh magaca websaydhka ay ka soo jeedaan, wakhtigooda kaydinta aaladda dhamaadka iyo lambar gaar ah.
3. Hay'ada ayaa dhigaya cookies-ka aaladda dhamaadka isticmaaleha Bakhaarka iyo marin u helka waa hawl wadeenka Bakhaarka.
4. Kukiyada waxaa loo isticmaalaa si: o loogu habeeyo waxyaabaha websaydhada Bakhaarka waxyaabaha la doorbido ee Isticmaalaha isla markaana kor loogu qaado isticmaalka bogagga internetka. Gaar ahaan, feylashaani waxay u oggolaadaan inay aqoonsadaan aaladda Adeegga Bakhaarka oo ay si sax ah u soo bandhigaan websaydhka, oo ku habboon baahiyahooda shaqsiyeed; o Abuurista tirakoobyo gacan ka geysanaya fahamka sida Isticmaalayaasha Bakhaarka loo adeegsado websaydhada, taas oo u oggolaaneysa hagaajinta qaab dhismeedkooda iyo waxa ku jira;
5. Dukaanku wuxuu adeegsadaa laba nooc oo aasaasi ah oo ka mid ah buskudyada: "fadhiga" buskudka iyo cookies "joogto ah". Kukiyada kulanku waa faylal ku meel gaar ah oo lagu keydiyo aaladda dhamaadka adeegsadaha illaa ay ka baxaan websaydhka ama damiyaan softiweerka (biraawsarka bogga). Kukiyada joogtada ah waxaa lagu kaydiyaa aaladda dhamaadka dhamaadka Adeegga waqtiga loogu cayimay cabirradaha cookie ama ilaa ay ka tirtirayaan Adeegga.
6. Bakhaarku wuxuu adeegsadaa noocyada soosocda ee cookies: "lagama maarmaanka" cookies, oo u oggolaanaya adeegsiga ka jira Dukaanka dhexdiisa, tusaale ahaan, cookies cookies-ka loo isticmaalo adeegyada u baahan xaqiijinta gudaha Dukaanka; cookies-ka loo isticmaalay si loo hubiyo amniga, tusaale ahaan loo isticmaalay in lagu ogaado khayaanada duurka xaqiijinta gudaha Dukaanka; Kukiyada "Waxqabadka", oo awood u siineysa aruurinta macluumaadka ku saabsan sida loo adeegsado websaydhyada Bakhaarka; Kukiyada "shaqeynaya", awood u siinta "xasuusinta" dejiyaha uu soo xulay isticmaaleha iyo shaqsiyeynta qaabeeyaha isticmaaleha, tusaale ahaan marka loo eego luqadda la soo xulay ama gobolka Adeegga, cabirka font, muuqaalka websaydhka, iwm. Kukiyada "xayeysiinta", oo u saamaxa dadka isticmaala inay soo bandhigaan waxyaabaha xayeysiinta ah ee ku habboon danahooda.
7. Marar badan, softiweerka loo adeegsaday bogagga internetka (biraawsarka bogga) asal ahaan wuxuu u oggolaanayaa ku keydinta buskudka qalabka dhamaadka isticmaalaha. Isticmaalayaasha Bakhaarka ayaa beddeli kara nidaamka cookie-ka waqti kasta. Nidaamyadan waa la beddeli karaa gaar ahaan hab ay u horjoogsadaan maaraynta otomaatiga ee cookies-ka ee ku jira aaladaha biraawsarka ama in lagu wargeliyo iyaga mar kasta oo la galiyo aaladda Adeegsiga Dukaha. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan fursadaha iyo qaababka loo maareeyo cookies waa la heli karaa barnaamijyada softiweerka ah (web browser).
8. Hawlwadeenka Bakhaarku wuxuu ogaysiinayaa in xannibaadaha isticmaalka cookies ay saameyn ku yeelan karaan qaar ka mid ah howlihii laga heli karo websaydhyada dukaanka.
9. Kukiyadaha lagu dhejiyo qalabka dhamaadka Qalabka Isticmaalaha sidoo kale waxaa isticmaali kara xayeysiiyayaasha iyo la-hawlgalayaasha la shaqeynaya hawlwade dukaanka.
10. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan kukiyada waxaa laga heli karaa www.wszystkoociasteczkach.pl ama qaybta "Caawinta" ee qaybta biraawsarka bogga.